Pony sida xayawaanka Xayawaanka | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Pony sida xayawaanka Xayawaanka
Nasiibku waa jecel yahay carruurta, laakiin ma ahan mid raqiis ah oo sahlan oo lagu daryeelo
Inkasta oo dabeecadda midabtakoorka ee Jarmalka lagu yaqaano sannado badan, wax la mid ah baaskiil wadajir ah ayaa nagu dhacay. Badanaa waa wax fiican in aad ilmahaaga siiso dhalasho ama munaasab kale oo midba midka kale ah, laga yaabee xitaa Kutschwägelchen.
Caruurta-jecel iyo xakameyn, laakiin: midabyada waxay u baahan yihiin meelo badan oo nool
Ma jiraan wax khalad ah, sababtoo ah la macaamilka fardahani waa mid faa'iido u leh ilmo. Laakiin nasiib daro waxa ay si xun u saameysay dabeecadda fardahaan yar yar, oo inta badan xuduud u ah xayawaanka xoolaha. Mid ka mid ah waxay hoos u dhigeysaa isbeddellada la isku halleyn karo waxayna aaminsan yihiin in ay heli karaan ugu yaraan cunto iyo daryeel. Xaqiiqdii waa kuwo miiran; laakiin xayawaan kasta wuxuu u baahan yahay heer nafaqo si loo noolaado nolol caafimaad leh iyada oo la raacayo noocyada ay ka kooban tahay. Sidoo kale naagaha yar yar.
Neef ahaan sida xayawaan caruur ah
Xaqiiqdii bilowgii, haddii qof magaalada deggani uusan lahayn dhul ku filan ama uu qaraabo ku leeyahay waddanka, waxba kama qaban karo dabeecada aaska. A pony, sida aan u sheegay, waxay u baahan tahay meel - iyo xitaa wax yar. Waxay rabtaa in ay ku noolaato daaqsinka illaa dayrta illaa dayrta. Waddankeeda Waqooyiga waxay joogtaa xitaa bilaha jiilaalka. Sidaas ma aha faras xasilloon!
Dabcan waxaan wali u baahanahay deganaansho oo u baahan inuu noqdo mid weyn oo ku filan inuu qabsado cuntada jiilaalka ama kaydinta (oo ku saabsan 30-35 Boqolkiiba Saar). Taasi waxay u baahan tahay meelo badan! Waxay kaloo qaadataa dhowr boqol oo rodol oo boorash ah; sababta oo ah canuggu ma noolaan karo kali kali.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qolka cawska si uu u baahdo, sababtoo ah xitaa jilicsan ayaa rabta inay noqoto mid diiran oo jilicsan. Xitaa ma dooneyno in aan ka hadalno saacadaha shaqada, sababtoo ah waxaad ku qasban tahay inaad u qaadato si aad u nadiifiso qashinka maalin walba oo aad ku rushayso caws. Intaa waxaa dheer, is ogeysiinta foosha ee farasiga isaga qudhiisa ayaa leh buraash iyo harraad, sababtoo ah haddii kale waxaad si dhakhso ah u yeelan doontaa xayawaan carro leh, oo xayawaan leh.
Iyada oo iibka a pony qurux badan si xaaladaha qaarkood ku xiran yihiin. Ha u maleynin in beer ballaaran uu ku filan yahay. Ugu wanaagsan, tani waa ku filan dhowr ah bakayle, laakiin ma aha for a pony.
Fikradaani waxay u badan tahay dadka deggan magaalooyinka marka loo eego dadka reer miyiga ah, kuwaas oo badiyaaba bixiya xaalado wanaagsan. Kuwa ku nool meel u dhow waddanku waxa kale oo laga yaabaa in ay helaan hab lagu qaadayo faraskiisa kirada beerta iyo daaqa.
Waa in sidoo kale la xusuustaa in midkood aanu raqiis ahayn. Haddii aad iibsato Icelander, Shetlander ama norweji, waa inaad ku tiraahdaa xayawaan ku saabsan 750 Euro - iyadoo ku xiran jinsiyada, fuulitaanka iyo wadista degitaanka. Intaa waxaa dheer, waxaa jira meelo yaryar, sahay, jilbaha, saddeeryaha, gawaarida iyo walwalka ee hooves leh madowmith.
Ilmaha iyo canugga
Si kastaba ha noqotee, haddii aad maskaxdey dhammaan dhibaatooyinkaan markaa waa inaadan ka baqin inaad iibsato. Ha u jeesan inaad iibsato faras raqiis ah. Inta badan waxaa jira wax ka danbeeya. Ama xayawaanku waa mid xun ama aan ahayn caruur, qaniinyo, laga yaabee jiran.
Waa in sidoo kale la xusuusto ujeedada aad rabto inaad iibsato midab. Gaadiidka carruurta, kuwa ugu yar ayaa ku filan. Haddii aad rabto inaad raacdo, waa inaad ku iibsataa Icelandic ama Noorway. Kuwani waxay leeyihiin dherer ah oo ku saabsan hal mitir iyo wax ka sarreeya.
Dabeecadda, dabeecadaha ayaa jecel carruurta. Mid ka mid ah ayaa ka fekeraya sawir ka fiican marka loo eego carruurta oo ay la socdaan midab. Hadduu ku socdo xagaaga, jiidashada gaadhi laba-curyaan ah ama horay loo soo taagay barxadda jiilaalka ee xilliga qaboobaha - had iyo jeer waa saaxiib sax ah oo nin. Haddii aad leedahay beer ballaaran, waxaad u isticmaali kartaa faras yar yar ee beerta. Marka loo eego cabbirka iyo isticmaalka quudinta, waxa xitaa ka sarreeya waxqabadka farasaha waaweyn.
Hadda waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneysid meesha laga iibsado midab. Halkan waxaad ka heli doontaa joornaalada xayawaanka kala duwan oo bixiya midabyo qaybta xayeysiinta. Sidoo kale wargeysyada maalinlaha ah waxaa badanaa lagu iibiyaa fardaha yar yar.
Qalabka dahsoon sida xayawaanka
Xayawaanka ugu fiican ee carruurta | Xayawaanka
Guntinta sida xayawaanka raba
Kabriidada sida xayawaanka
Abaalmarin sida xayawaanka
Jiirka sida xayawaanka raba
Koofurada sida xayawaanka
Ujir sida xayawaanka rabaayadda ah
Eeyooyinka sida xayawaanka caruurtu?
Kalluunka sida xayawaanka
Xayawaanka - Sababtoo ah xayawaanka guryaha waa muhiim?
Sawir gacmeedka lagu sharxay tallaabo tallaabo tallaabo ah
Xaashiyaha jimicsiga Cilmi-baarista